Tele RELAY တစ်ခု - တစ်ခုချင်းစီစိတ်ရှည်ပစ်မှတ်ထားခြင်းအားဖြင့်
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ "တစ်ခုချင်းစီစိတ်ရှည်ပစ်မှတ်ထားခြင်းအားဖြင့်
ဥပမာလင်ဒါ Boyed, တစ်လုံ့လရှိသူ 52 နှစ်အရွယ်လုပ်ငန်းခွင်ကုထုံးသည်ကမ်းခြေနှိပ်များနှင့်ကြာမြင့်စွာသွားလာယူခြင်း, ဟာဝိုင်ယီအတွက်သူမ၏မိသားစုနှင့်အတူအားလပ်ရက်အပေါ်ဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့။ သူမပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ခံစားမှုလှုပ်လို့မရဘူးရည်ရွယ်ပါသည်။ သူမအိမ်ကပြန်လာအချိန်အားဖြင့်, ကိုလံဘတ်, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အနီး, သူမ၏အသားအရေအဝါရောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမ၏ဆရာဝန်မကောင်းတဲ့သတင်းပို့ပြီးသူကားအဘယ်သူတစ်ဦးကင်ဆာရောဂါရှာဖွေကုသရေးပါရဂူမှသူမ၏လွန်: သူမ၏အသည်းအတွက်သည်းခြေပြွန်ကင်ဆာပြီးသားဆိုကောင်းသောလုပ်ဖို့ဓာတုကုထုံးသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ဘို့ဝေးလွန်းပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ သူကသူမ၏နောက်ဆုံးလအနည်းငယ်အဘို့သူမ၏အဆင်ပြေစောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန် offert ။
Boyed ၏ခင်ပွန်းဒါကဟောကိန်းကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ သူကအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကင်ဆာများအတွက်စမ်းသပ်ဆေးဝါးလေ့လာမှုများအပြေးခဲ့သူကားအဘယ်သူအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်ရဲ့ကင်ဆာစင်တာမှာဆရာဝန်တစ်ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Boyed သူ့ကိုယ်သူတက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ မျိုးဗီဇကိုစမ်းသပ်သူမ၏မြင်းသရိုက်အနာသက်တမ်းကုန် FGFR ( "fibroblast growth factor receptor" အတိုကောက်) ဟုခေါ်သည့်မျိုးဗီဇထဲမှာဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်, qui ကဲ့သို့ကင်ဆာရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းအတက်အကျကိုအဆုံးအဖြတ်ခဲ့ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ အဆိုပါဆရာဝန်သူမကို FGFR mutation ၏လုပ်ရပ်များတားစီးဖို့သက်တမ်းကုန် BGJ398 လို့ခေါ်တဲ့စမ်းသပ်မူးယစ်ဆေး, အပ်ပေးတော်မူ၏။ Boyed ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုတက်ရှင်းလင်းခြင်း, မြင်းသရိုက်ပုံကြီးထွားလာရပ်တန့်, သူသူမသည်ပြန်လည်အလေးချိန်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
အဆိုပါအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ဘက်စုံကင်ဆာစင်တာ - အာသာ G. အဂျိမ်းကင်ဆာဆေးရုံနဲ့ Richard ဂျေ Solove Research Institute မှ။
သူမသည်ပုံပြင်ကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါဒီရက် Boyed ဘက်မှာ bubbly ရရှိသွားတဲ့။ "အခြေခံအားဖြင့်အခုပုံမှန်ဘဝကိုဦးဆောင်လမ်းပြ," သူမကဆိုသည်။ "ငါသည်ကိုယ့်အထက်တန်းကျောင်းမှငါ့သားဘွဲ့ရ watched ။ ငါကင်ဆာမတိုင်မီလုပ်ခဲ့တယ်ထက်ငါတကယ်အတိတ်နှစျတှငျ သာ. ပြု၏ထင်ပါတယ်။ "
အသစ်ကကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဝါးများဓာတ်ခွဲခန်းများကနေပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုတွေဝင်အဖြစ် Boyed ကဲ့သို့ပုံပြင်, အမေရိကန်တလွှားကိုထုတ်ကစားခြင်းနေကြသည်။ လကျထကျကင်ဆာလူနာတွေကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါဓာတုကုထုံးနဲ့ဓါတ်ကင်ခြင်း၏တဦးတည်း-size-ကိုက်ညီတဲ့-အားလုံး regimen မကြာမီအတိတ်၏အရာဖြစ်နိုင်ပါစေ။ အဲဒီအစားဆရာဝန်တွေ ပို. အဘယ်အရာကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ကုသမှုတစ်ခုမသိမသာကွဲပြားအမြင်ရိုက်နေကြသည်အလုပ်လုပ်ကြောင့် qui လူနာကင်ဆာအဘယ်အရာကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ ဤဒါခေါ်တိကျစွာဆေးပညာအယူအဆ, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဆေးဝါး, နောက်ဆုံးတွင်ဆရာဝန်များကအလုပ်လုပ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်း-ရှိတယ်ဒါကအတိအကျမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်ကုသမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်, မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးမှုများ-၏လူနာနှင့်ကင်ဆာအကျိတ်နှစ်ဦးစလုံးကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိကျစွာ-ဆေးဝါးမေဲ့ယခုအဖြူဖြစ်ခြင်းအတော်များများရောဂါများလေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်နေကြတယ်, သူတို့သက်ရောက်မှုကင်ဆာကုသမှုဆုံးလုံးဝအဖြူဖြစ်ခြင်းခံစားခဲ့ရသည်။ သုတေသီများဗီဇနဲ့ 'em ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်ဒါကမူးယစ်ဆေးဝါးများမှကင်ဆာနှင့်ကိုက်ညီခြင်း em ပေါ်လာမှာအဲဒီမျိုးဗီဇဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေတစ်ကြီးထွားလာစာရင်းတည်ဆောက်နေတယ်။ အဆိုပါကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဝါးများအဆိုပါဇင်အတွက်ယခုရေတွက်ဒါကဗီဇပစ်မှတ်ထားနိုင်ပြီး, သုတေသီများပိုပြီးရာပေါင်းများစွာ၏လမ်းကြောင်းအပေါ်ပူဖြစ်ကြသည်။ ကို virtual သေခြင်းတရားစာကြောင်းများမှတ်အချို့ကကင်ဆာအောင်စအဘို့, အလားအလာပြီးသားတိုးတက်လာသောအများကြီးဖြစ်ပါသည်: ကောင်းစွာသစ်ကိုဗီဇကုထုံး-လိုက်ဖက်တအဆုတ်-ကင်ဆာလူနာတွေကို sponds ၏အကြောင်းတဝက်, သူများသည်ဆဲလ်၏ထက်ဝက်အတွက်ကင်ဆာပြန်မလာပါဘူး။ FGFR inhibitors, Boyed ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ဒါကမူးယစ်ဂတိ-ပါပြီဆီးအိမ်, အဆုတ်, ရင်သားကင်ဆာနှင့်သားအိမ်ကင်ဆာအချို့သည်အမျိုးအစားများများအတွက်သည်းခြေပြွန်ကင်ဆာသြစတေးရည်မှန်းချက်အတွက်သာပြ။ "တစ်ဦးတည်း FGFR inhibitor မူးယစ်ဆေးဝါးများယခုပွင့်လင်းခြောက်လစမ်းသပ်မှုတွေကျနော်တို့-ရှိသည်," Sameek Roychowdhury, Boyed ရဲ့ဘဝသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. အဘယ်သူသည်ကင်ဆာရောဂါရှာဖွေကုသရေးပါရဂူကပြောပါတယ်။ "ဒီနှစ်ကုန်အားဖြင့် 20 ရှိ shoulds ။ "
ကင်ဆာသုတေသန၏လယ်ပြင်တွင်ကိုက်ညီတဲ့နှင့်စတင်ဆယ်စုနှစ်များစွာပြီးနောက်တိကျစွာဆေးပညာကိုဖန်ဆင်းတိုးတက်မှုအမှန်ပင်ကြိုဆိုသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မျှမအမှားလုပ်: မရှိပါဆေးပညာ icts ဒူးကင်ဆာရှိမယ်မှပင်နီးကပ်မဟုတ်ပါဘူး "ရောဂါပျောက်ကင်း။ " ။ ရောဂါအဆင့်မြင့်ကင်ဆာနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်ပြီးသား metastasized သူများသည်-ဒါက-ကြပါပြီ, ဒါမှမဟုတ် 10 အတွက်တဦးတည်းသာပြန့်နှံ့ဖို့-ရှိလောလောဆယ်အသစ်တခုမူးယစ်ဆေးဖို့ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်နိုင်စေရန်လူသိများဗီဇထွက်လှည့်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက် 100 လူနာအသစ်ကကုထုံး၏ရာခိုင်နှုန်းသာပေးရဖို့ဖြစ်ပါတယ် Genomics စမ်းသပ်ခြင်းအခြေခံသည်" Roychowdhury ကပြောပါတယ်။ "ရည်ရွယ်ချက်သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြုပါ 10 Genomics စမ်းသပ်ခြင်းကိုး၏ရလဒ်များကိုများအတွက်အထူးကုသမှုပေးရန်မည်သို့မသိရပါဘူး။ "
အများစုမှာလူနာများပင်တဦးတည်း-In-တစ်ဆယ်ကံကောင်းသည်ဟုမရပါစေနဲ့။ အတော်များများကဆရာဝန်များနေဆဲဧရိယာ၌ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်းနှင့်တိကျစွာဆေးဝါးကုသမှုတံခါးကိုဖွင့်လိုက်ပါရနိုင်ပါသလားဒါကဗီဇစမ်းသပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရန်ပျက်ကွက်။ စရိတ် est သြစတေးတစ်နှစ်အတားအဆီး: အာမခံကုမ္ပဏီများအားလုံလောက်စွာစမ်းသပ်မှုများအတွက်ငွေကြေးပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ စာတမ်းအဘို့အကြောင်းပြချက်, ကင်ဆာလူနာတွေကိုသာ 10 ရာခိုင်နှုန်းကမျိုးရိုးဗီဇစမ်းသပ်ခံရ။ Precision ဆေးပညာမှာအကောင်းဆုံး, နှစ်စဉ်အမေရိကန်ကင်ဆာရောဂါရှိတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်နီးပါးဘယ်သူ2လူဦးရေသန်းသာအနည်းငယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုကူညီပေးနေသည်နှင့်အချိုးအစားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ 17 သန်းကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေထဲမှာအများကြီးသေးငယ်သည်။
PROGRESS အောင်မှတ်ကို virtual သေခြင်းတရားစာကြောင်းတိုးတက်လာသောအချို့ကကင်ဆာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားအလားအလာရှိပါတယ်။ အဆုတ်ကင်ဆာလူနာ sponds ကောင်းစွာ Target ကုထုံးမှထက်ဝက်ခန့်။ တိကျဆေးဝါးရင်သားကင်ဆာကုသခြင်းအတွက်သြစတေးပြကောင်းမွန်သောရလဒ်များမှာရှိပါတယ်။
BSIP / Universal ပုံများ Group မှ / Getty
တိုးပွားကုသမှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီလူနာအရေအတွက်ကလောင်းဆရာဝန်များကအကူအညီတောင်းအတုထောက်လှမ်းရေးမှလှည့်နေကြပါတယ်။ မျိုးဗီဇကိုစမ်းသပ် Ph.D ၏တောင်မှတစ်ခုစစ်တပ်ကအပေါင်းတို့၏အဓိပ္ပာယ်စေနိုင်ဘူးဒါကသိပ်ဒေတာထွက် churning ဖြစ်ပါတယ်။ artificial ထောက်လှမ်းရေးတစ်ဦးအားသာချက်တစ်ခုတာဝန်ယူမှုအနေဖြင့်အချက်အလက်များ၏ဒါကအသံအတိုးအကျယ်ပြန်သွားလေ၏။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ယခုအသစ်သောဆက်ဆံရေး entre အကျိတ်မျိုးဗီဇကင်ဆာကြီးထွားမှုနှင့်တိကျသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရှာဖွေမျိုးရိုးဗီဇစမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုသန်းပေါင်းများစွာနှင့်လူနာရလဒ်များမှတဆင့်အလွန်အမင်းနိုင်ပါတယ်ဒါက "နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှု" software ကိုမှကင်ဆာကျိတ်အတွက်အားနည်းချက်များရှာဖွေတာ၏တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနေကြသည်။
နှစ်နှစ်အတွင်း၌သူတို့၏တံခါးများကိုတဆင့်သွားလာသူကားအဘယ်သူတစ်ဦးကင်ဆာလူနာတစ်ဦးကိုကုသ option ကို, Los Angeles မြို့စီမံကိန်းများကိုပြင်ပမျှော်လင့်အမျိုးသားဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာစီးတီးအားဖြစ်ပါတယ်ဒါကလေးသာမှု၏မြင်းသရိုက်အနာပေါ် Genomics စမ်းသပ်လုပ်ဖို့ US မှာပထမဦးဆုံးအဓိကဆေးရုံဖြစ်တိုးပွားလောင်း ICT 9,000 ကင်ဆာလူနာတိုင်းတစ်ခုတည်းမှာတစ်နှစ်။ "ဟုအဆိုပါအဏုအောက်မှာ identiques ကွညျ့လိုကျအကြိတ် view ၏အချက်အောက်တွင်တစ်ဦး Genomics ကနေအကြီးအကျယ်ခြားနားကြည့်ရှု," မိုက်ကယ် Caligiuri, Los Angeles မြို့ပြင်ပတွင်မျှော်လင့်အမျိုးသားဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာစီးတီး၏ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောပါတယ်။ "သူတို့ကကွဲပြားခြားနားကြသည်ကုသခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
သည်အခြားဆေးရုံများကိုအောက်တွင်အတိုင်းလိုက်နာအမျှသူတို့မှာကြိတ်ဆုံ AI အများအတွက်ဒေတာ-grist တစ်ကျယ်ပြန့်အသံအတိုးအကျယ်ကို generate မည်။ ပုံမှန်လူ့မျိုးနွယ်၏မျိုးရိုးဗီဇ၏ 20,000 ဗီဇသုံးထရီလီယံ DNA ကိုဘေ့, ဒါမှမဟုတ်အချက်အလက်များ၏-bits, mutated qui peut êtreမဆိုပါဝင်သည်, ထပ်ခါတလဲလဲကိုရွှေအကြောင်းတရားများကင်ဆာနည်းလမ်းများ၏မဆိုအရေအတွက်ကိုခုနှစ်တွင်ရွှေ့ခဲ့၏။ ဆဲလ်များ၏လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထရီလီယံတစ်ခုချင်းစီ icts ကိုယ်ပိုင်ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ဘာသာရပ်ဟာမျိုးရိုးဗီဇ၏၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မိတ္တူရှိထားသည်။
ပန်းတိုင် DNA ကိုပုံကိုသာဝေစုဖြစ်ပါသည်: DNA ကိုတစ်အသေးစိတ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်သွားရမည်အကြောင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဲလ်တွေအတွက်အမှန်တကယ်အလုပ်ငါတို့ဇီဝဗေဒနီးပါးအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ဒါကပရိုတိန်း-ရှုပ်ထွေးမော်လီကျူးများကထွက်ယူသွားတတ်၏။ ပရိုတိန်းတစ်ကင်ဆာအကျိတ်များ၏ကြီးထွားမှုနှင့်ကတိုက်ခိုက်နေအတွက်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏အလုပ်နှစ်ခုစလုံးထိန်းချုပ်ထား။ အဲဒီမှာအခြေခံပရိုတိန်းနဲ့ 'em အပေါ်မူကွဲ6သန်းသကဲ့သို့အတော်များများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သုတေသီများကယခုကင်ဆာတစ်ရှူးနမူနာများတွင်တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုထောင်နဲ့ချီတဲ့တိုင်းတာခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသော-သင်ယူမှုအစီအစဉ်များမှအဲဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုအစာကျွေးနေကြသည်။
"မူးယစ်ဆေးဝါးဗီဇပစ်မှတ်ထားကြဘူး, သူတို့ကပရိုတိန်းပစ်မှတ်ထား," ဒါဝိဒျ Spetzler, Irving တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက် cari ဘဝကသိပ္ပံအကြီးအကဲသိပ္ပံနည်းကျအရာရှိကပြောပါတယ်။ "။ ကျနော်တို့ကင်ဆာနားလည်သဘောပေါက်အတွက်အများစုမှာတိုးတက်မှုမြင်နေပါတယ်အဘယ်မှာရှိရဲ့, ထိုသို့ကျနော်တို့လာမယ့်ငါးနှစ်ကိုသိမ်းဆုံးသောအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်မယ့်ရဲ့ဘာလဲ" ဂျက်ဖရီ Balser, အဗန်ဒါဘစ်လ်တက္ကသိုလ် Medical Center မှအကြီးအကဲအဘယ်သူသည်ဆရာဝန်တစ်ဦး Says: "ဒါကတစ်ဦးရဲ့ စားပွဲပေါ်မှာမှလာမယ့်မယုံနိုင်လောက်အောင်နက်ရှိုင်းသောအသိပညာ၏တွေအများကြီး။ "
နက်ရှိုင်းသော-သင်ယူမှု algorithms သိပ္ပံပညာရှင်များ-သူတို့ပါဘူးသူတို့လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနေကင်ဆာနောက်ကွယ်မှဇီဝဗေဒ "နားလည်" ဘယ်တော့မှလမ်းကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား, သူတို့ကလူနာတစ်သျှူးနမူနာအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ reams တွေဟာအစာကြေကင်ဆာအချို့ကိုမျိုးဒါကခဲ့နဲ့ To-qui ကုသမှုနှင့်အဘယ်သူသည်မဟုတ်ပြန်ကြားခဲ့သည်သူကားအဘယ်သူသူများသည်လူနာများ၏အန္တိမကံကြမ္မာနှင့်အတူဒါကသတင်းအချက်အလက်ပတျသကျ။ ထိုသို့တဦးတည်းရည်မှန်းချက်အချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့်သောရေနှင့်ညီမျှသုံးပြီးအကြိမ်ထောင်ချီကျင်းပမယ့် hit-or-လွဲချော်ပေါင်းစပ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုမျိုးပါပဲ။ ကွန်ပျူတာများ, ပြော, လူသားတစ်ဦး-Link မမြင်ရရနိုင်ပါသလားဒါကဒေတာအတွက်သည်းခြေပြွန်တစ်ဦးအထူးကင်ဆာဖို့ FGFR ဗီဇ၏ရှေ့မှောက်တွင်ပုံစံများထုတ်မာရ်နတ်နိုင်ပါတယ်။
Spetzler ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုဥပမာ, နက်ရှိုင်း-သင်ယူမှုဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပရိုတိန်း-ခိုင်ခံ့သောဒေတာများအကြပ်အတည်းမှအလုပ်လုပ်သည်။ cari မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိကြောင်း 170,000 ကင်ဆာလူနာထံမှအချက်အလက်များ၏ထွက်အသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို wring ဖို့, ကုမ္ပဏီကွဲပြားခြားနားသောနက်ရှိုင်းသော-သင်ယူမှု algorithms ရာပေါင်းများစွာ enlists ။ အဆိုပါအစီအစဉ်များကိုတဦးတည်းကိုယှဉ်ပြိုင်အမှန်ကတော့ဒေတာအတွက်ပုံစံများမူးယစ်ဆေးဝါးများ qui လူနာနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် qui ဒါကအရိပ်အယောင်ညွှန်ပြရှာတွေ့မှအခြား Reviews ။ "အမျိုးမျိုး algorithms သူတို့ဟာပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အလုပျနိုငျအတူတူကွဲပြားခြားနားသောလူနာရည်မှန်းချက်လွဲချော်လိမ့်မယ်" ဟု Spetzler ကပြောပါတယ်။
AI အပေးကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်သေးခန္အတွက်ယူတစ်ရှူးနမူနာဆလိုက်ဖတ်ရှုဖို့သင်ယူခြင်းအားဖြင့်အသစ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများမှလူနာကိုက်ညီဖို့ဘယ်လိုမှသဲလွန်စ၏အခြားအရေးပါသော set ကို Reviews ။ သူများသည်ဆလိုက်-ရှိသည်ဟုအမြဲတမ်းဆဲလ် '' သဏ္ဌာန်ပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးကင်ဆာရောဂါနှင့်အတူတက်လာသူကားအဘယ်သူရောဂါဗေဒ, ကဏုအောက်မှာဖတ်ပါခဲ့။ ဒါခေါ် "စက်သင်ယူမှု" အစီအစဉ်များအတွက်ခြေလှမ်းစတင်နေကြသည်။ အစ္စရေးကုမ္ပဏီသက်တမ်းကုန် Nucleai 20 သန်းဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့ခန္ကင်ဆာအသိအမှတ်ပြုမှ slides, ထိုသို့ပြီးသား 97 ရာခိုင်နှုန်းကတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူလုပ်ဆောင်အတူအိုင်စီတီဆော့ဖ်ဝဲကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပွီဟုခေါ်တွင်။
ကင်ဆာ Diagnosing ရုံက start ဖြစ်ပါသည်, CEO ဖြစ်သူ Avi Nucleai Veidman ကပြောပါတယ်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ယခုရောဂါဗေဒ-ဒါကနိုင်ပါတယ်သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှပွဲစဉ်လူနာကကူညီနိုင်သည်ထက်ဆလိုက်ကနေနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ extract မှ AI အသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Veidman ပြောပါတယ် "ဟုသတင်းအချက်အလက် fait Que တစ်ရှူးအများစုမှာအဖြူဆရာဝန်များသို့မဟုတ် software ကိုအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကကုသမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစားနေကြိုးစားကြသောအခါ, ကိုအသုံးပြုမ" ဒုံးကျည်အခြေစိုက်စခန်းအသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ AI အဆော့ဝဲ Developing အစ္စရေး၏ထောက်လှမ်းရေးအားသာချက်များနှင့်အတူဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုသုံးစွဲသူကားအဘယ်သူနှင့်အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ဂြိုဟ်တုပုံရိပ်တွေကင်ဆာသူ၏လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလှည့်မီ။ "AI အပိုပြီးထိရောက်မှုပုံထဲက features တွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဝှက်ထားသောပုံစံများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ " သူကမှတ်ချက်ပြုဥပမာ, စစ်တိုက်၏သိမ်မွေ့ဆိုင်းဘုတ်များ entre les လူနာရဲ့ကင်ဆာဆဲလ်များနှင့်ခုခံအားစနစ်ဆဲလ်ဆော့ဖ်ဝဲအားဖြင့်ပြောက်နိုင်ပါတယ်ဒါက, နှင့်သူများသည်ဆိုင်းဘုတ်များကင်ဆာအများအပြားသစ်ကို immunotherapy မူးယစ်ဆေးဝါးများ-ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, တိုက်ရိုက်ကင်ဆာတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြင့်မဟုတ်အလုပ်ဒါကမူးယစ်ဆေးဝါးများကအကျိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့နိုင်အောင်တစ်လူနာရဲ့ရောဂါပြီးစနစ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ရည်မှန်းချက်များထဲမှအားနည်းချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါဖြစ်စေမမှမရှိမဖြစ်သဲလွန်စပေးနိုငျ ။
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခုကရောဂါဗေဒကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ slides ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်ဒါက Lunit AI အ Software များဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်, ဥပမာ, qui လူနာသက်တမ်းကုန်စစ်ဆေးရေးဂိတ် inhibitors ကိုခေါ်ကင်ဆာမူးယစ်ဆေးတစ်ခုနှိုင်းသစ်ကိုမျိုးရန် sponds ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးလူနာရဲ့ခုခံအားဆဲလ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကနေကာကွယ်တားဆီးရေး qui ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။ Lunit Que la software ကိုဒါကစမ်းသပ်သန်းကိုပိုမိုတိကျမှန်ကန်တောင်းဆိုမှုများတစ်ဦးတည်းမျိုးရိုးဗီဇဒေတာများကိုအသုံးပြု 50 ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်ပါတယ်။ "ဒါဟာလူ့မကျြစိအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ထက်ကျော်လွန်လမ်းင့်," CEO နဲ့ဆရာဝန် Beomseok Brandon Suh ကပြောပါတယ်။ "ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုလူတွေအသိအမှတ်ပြုဘို့သိပ်ရှုပ်ထွေးနေကြသည်ဒါကပုံစံများရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဇီဝအဓိပ္ပာယ်ကိုရည်မှန်းချက်-ရှိသည်။ "
အလားတူတိုးတက်မှုတွေ, X-ray ဖတ်ဒါက AI အ-based စနစ်များနှင့်အတူရာအရပ်ကိုရိုက်ယူခြင်း MRIs နှင့်အခြားရုပ်ပုံဒေတာနေကြသည်။ "အဲဒီမှာ algorithms တစ် mammogram ဖတ်နေမှာအဖြစ်ကောင်းပါတယ်ဒါကပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအလွန်လေ့ကျင့်သင်ကြားရေဒီယိုရောင်ခြည်အထူးကုရှိသည်, ကိုရွှေတစ်အရေပြားအထူးကုဆရာအဖြစ်အရေပြားကင်ဆာအသိအမှတ်ပြုကိုပြု၏," Chi Young ကအိုကေ, ဟူစတန်အတွက် MD Anderson ကကင်ဆာစင်တာမှာရောဂါဗေဒပညာရှင်ကပြောပါတယ်။ "ဒီတိုးတက်မှုအံ့ဖှယျဖြစ်၏။ " နောက်ဆုံးတော့သူများသည်ပုံများ, လွန်းတစ်ခုတည်းလူနာရဲ့ကင်ဆာများ၏အားနည်းချက်များ၏အရိပ်အမြွက်စက်စက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ကင်ဆာ Diagnosing ကျော်လွန်ပြီးသွားကြဖို့ AI အစနစ်တွေကိုကူညီကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
နက်ရှိုင်းသော-သင်ယူမှု algorithms ပိုပြီးဒေတာကိုကြည့်ခြင်းနှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စက်သင်ယူမှုအစီအစဉ်များပြုကြထက်ပိုပါကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ သူတို့ကနည်းနည်း Seymour, ဘယ်သူ့အစာစားချင်စိတ်ကြီးထွားလာရပ်တန့်ဘယ်တော့မှထိတ်လန့်၏ Little ကဆိုင်ထဲမှာကျီးစက်ရုံကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ သုတေသီများနှင့် Clinician ဒါကထံမှ databases ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုသင် 250,000 အတော်များများကင်ဆာလူနာတွေကိုရှိသတင်းအချက်အလက်ပါဝင်သည်ယခု-ရှိသော်လည်းနီးပါးလုံလောက်မဟုတ်ပါဘူး။
Tek IMAGE / သိပ္ပံ PHOTO စာကြည့်တိုက် / Getty
တစ်ဦးလူနာရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကင်ဆာနှင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ် qui ကုသမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပုံဖော်နိုင်ပါတယ်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကင်ဆာဆဲလ်ကဆက်လက်ရှင်သန်နှင့်အစွမ်းထက်ကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဝါးများခုခံအားဆဲလ်ရှောင်ကိုကူညီနိုငျဒါကအဆက်မပြတ်နယူးမျိုးဗီဇသင်္ Developing တစ်ရွေ့လျားပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုအသိအမှတ်ပြုစတင်နိုင်မီ AI အ software ကိုတစ်ဦးအထူးပုံစံ၏ဥပမာထောင်နဲ့ချီတဲ့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်မြူတေးရှင်းရှိပြီးအထူးပုံစံစုစုပေါင်းတထောင်သာအနည်းငယ်လူနာတက်လာနိုင်ပါစေကတည်းကဆော့ဖ်ဝဲကောင်းစွာလူနာသန်းပေါင်းများစွာ၏ဒေတာ access လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့နိုင်ပါစေကတည်းက ပိုမိုမြန်ဆန်တိုးတက်မှုဖြစ်စေ။ "ကျနော်တို့ကမြင်းသရိုက်အနာတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကုသအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုယခုခန့်မှန်းချက်စေနိုင်သည်, ရည်မှန်းချက်အခုအချိန်မှာသူများသည်ဟောကိန်းများ၏သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းမှားရှိပါတယ်" ဟု UCLA ရဲ့ရှင်ပေါလု Boutros, UCLA ရဲ့ Jonsson ဘက်စုံကင်ဆာစင်တာများအတွက်ကင်ဆာဒေတာသိပ္ပံတက်အကြီးအကဲအဘယ်သူသည်ဆရာဝန်တစ်ဦးကပြောပါတယ် ။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု-နှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကင်ဆာဂြီနို Consortium, ထိုကင်ဆာသုတေသနသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရေးကွန်ယက်များကဲ့သို့အမည်များတစ်ဦးကနံပါတ်တစ်ခုနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ဂြီနိုလူနာ data တွေကိုဝေမျှဖို့သုတေသနစင်တာများနှင့်ဆေးရုံများများထဲတွင်ပေါက် Consortium-ပါပြီ။ နောက်ဆုံးတော့သုတေသီများကအချက်အလက်များ၏လိုအပ်အရေးပါအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောက်ရှိရန်ကူညီနိုင်ဒါကဒေတာ, လူနာ '' ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ကိုချွတ်နှင့်အတူစုဝေးစေတော်မူ၏။ "ငါတို့ရှိသမျှသည်စာတမ်းကွဲပြားခြားနားသောဒေတာကွန်ရက်များကွန်ရက်ကွန်ယက်သို့အတူတကွချည်ထားကြသည်အဘယ်မှာရှိအမှတ်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်" မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့ Caligiuri ၏စီးတီးကပြောပါတယ်။ Clinician လွန်း, သူတို့ကအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ, အဘယ်အရာကိုမြင်မှကုသခြင်း "re မြားကဲ့သို့အလူနာတွေ့ပါရန်, ဒါက data ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်ပါတယ်။ "ကျနော်တို့နေတဲ့လူနာရဲ့ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားကိုသှားဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ် shoulds နှင့်တက်မော်လီကျူးအဆင့်မှာဆင်တူဒါကကမ္ဘာတဝှမ်း 50 သေတ္တာများ pop လိမ့်မယ်" ဟုသူကဆိုသည်။
လူနာကမှဝင်ရောက်ခွင့်-ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ဆေးပညာအဘယ်သူမျှမအသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုမြန်ဆန်အသစ်သောမူးယစ်ဆေးထွက်ရဖို့, သုတေသီများမူးယစ်ဆေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင်မှ AI အသုံးပြီးနေကြသည်။ အသစ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများစမ်းသပ်အတွက်နှောင့်နှေး၏အကြီးမားဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအစမ်းအဘို့အလုံလောက်အောင်လူနာများအားစုဆောင်းနေပါတယ်။ သုတေသီများနှိုင်းယှဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်များများအတွက်စံကုသမှုရရှိရန်အခြား "ထိန်းချုပ်မှု" အုပ်စုတစ်စုကိုလည်းသောက်အသစ်ကမူးယစ်ဆေးကြိုးစားရန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မလိုအပ်သာ။ အသစ်တစ်ခုကိုမူးယစ်ဆေးတိကျစွာကတိပေးဖြစ်ပါတယ်တောင်မှအခါ, ကစမ်းသပ်မှုတွေမူးယစ်ဆေးကို run ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့လူနာတစ်နှစ်သတ်မှတ်အုပ်စုအလုပ်လုပ်တယ်ဒါကသရုပ်ပြပါ။
တစ်လျှောက်တွင်အမှုအရာမြန်ဆန်စေရန်, သုတေသီများမှာအားလုံးတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုစုဆောင်းဖို့မျိုးရှောင်ကြဉ်ပါရန် High-စွမ်းအင်သုံးစာရင်းဇယားနှင့်ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များသုံးစွဲဖို့စတင်နေကြသည်။ အဲဒီအစား, သူတို့ကတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအခွအေပါ့ကိုဘယ်လိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အတိတ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများတစ် mashup ကိုအသုံးပြုပါ။ "သင်တစ်ဒြပ်ထိန်းချုပ်မှုလက်မောင်းကနေရယူရလဒ်သင့်အနေဖြင့် Sami အဘိဓါန်သမားနှင့် protocol များနှင့်အတူရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်ထိန်းချုပ်မှု-အုပ်စုတစ်စုလူနာတကယ်တော့စာရင်းသွင်းခဲ့လျှင်အတိုင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောနေကြတယ်" ဟု Glen က de Vries, Medidata Solutions ၏ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်, qui စာရင်းအင်း tools တွေကိုဒီဇိုင်းပွီ ။
ဒါက Clinician များအတွက်ကလေးကိုပါစမ်းသပ်မှုတွေဖြေလျှော့ဖို့လုံလောက်တဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှင့်သုတေသီများအသေအပျောက်အများဆုံး Precision များအတွက်ကုသမှု, အများစုကပြင်းထန်တဲ့ကင်ဆာအတူတက်လာဖွယ်ရှိနေသည်။ ဥပမာ, glioblastoma, ဦးနှောက်ကင်ဆာ, ရောဂါ 15-လအတွင်း-၏မဆိုဗိုလ်မှူးကင်ဆာမှအနိမ့်ဆုံးပျမ်းမျှရှင်သန်မှုအချိန်ရှိထားသည်။ ဒါဟာ glioblastoma အကျိတ်မှာရရန်သွေးသည်ဦးနှောက်အတားအဆီးကနေတဆင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဒီဇိုင်းရန်လုံလောက်သောစိန်ခေါ်မှုပါပဲ။ ဒီရောဂါအနိုင်နိုင်တစ်ခုစမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးပေးဖို့အချိန်ကထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေမပြသနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ရဲ့ဒါကဒါကြောင့်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
စမ်းသပ်ဆဲမူးယစ်ဆေး glioblastomas မှာပိုကောင်းတဲ့ရိုက်ချက်များကပိုတိကျပေးခွငျးငှါ, Phoenix မြို့မှာရှိတဲ့ Barrow အာရုံကြောဌာနတွင်အသစ်ဖန်တီးအိုင်ဗီဦးနှောက်ကင်ဆာစင်တာမှဦးနှောက်-ကင်ဆာလူနာအတွက် "အရှိန်စမ်းသပ်မှုတွေ" ICT ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ တစ်ဦးကလူနာအသစ်တစ်ရပ်စမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးတိတစ်ခုထိုးပေးရောဂါပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးထိုးလည်းလူနာထိခိုက်စေရန်အသေး (အမှု၌အသစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်နေတဲ့စွန့်စားမှုအဆိပ်အတောက်ဖြစ်ထွက်လှည့်) ဒါပေမယ့်အကျိတ်ရောက်ရှိဖို့ရန်လုံလောက်သောကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ဆရာဝန်များကမူးယစ်ဆေးမဆိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည့်ရှုရန်အကျိတ်စမ်းသပ်ရန်။ တစ်ခုတိုးထိုးနှင့်အတူဒါဟာခဲ့လျှင်, စဉ်ဆက်မပြတ်လူနာ။ မရလျှင်, စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်ဆရာဝန်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များကုသမှုနောက်ထပ်သင်တန်းယူဖို့အချိန်ထွက်ရှာပါ။ "မြန်နှုန်းအလုပ်လုပ်ဒါကမူးယစ်ဆေးဝါးများရှာဖွေမတွေ့ရှိဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုဒါရိုက်တာအိုင်ဗီ Nader Sanai ကပြောပါတယ်။ အဆိုပါချဉ်းကပ်ထားပြီးသက်တမ်းကုန်ကင်ဆာ meningioma ဟုခေါ်တွင်ဦးနှောက်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ box ကိုပုံစံပြန်ရိုက်မယ့်ဒါကတဦးတည်းလူနာတစ်စိတ်ကြိုက်ကုသမှုတက်လှည့်လိုက်ပါတယ်။
အားလုံးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏နေစဉ်စာတမ်းပိုမိုနီးကပ်စွာဆုံးကင်ဆာကုသတိကျဖို့အရှုံးမပေးသည့်အခါနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်စေဖို့အတူတကွချဉ်းကပ်, အဘယ်သူမျှမနေ့မကြာမီကဒီမှာပါလိမ့်မည်ထင်။ သို့တိုင်, ကိုယ်ပိုင်ကုသနိုင်ရန်ပြောင်းရွှေ့ em ကုသမှု၏ပေးနေတာကြဲခြင်းဖြင့်အားလုံးနီးပါးကင်ဆာလူနာသည်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းနေသည်အလုပ်လုပ်ဒါကနည်းနည်းကံကောင်းပါစေရှိပါတယ်။ "သင်တစ်ဦး Genomics သို့မဟုတ်အခြားစမ်းသပ်မှုမှာကြည့်ရှုနှင့်တစ်ဦးလူနာရဲ့အကျိတ်တစ်ဦးတည်းသာ 100 လူနာထဲကသင်တို့အားမလိုအပ်တဲ့ပြဿနာများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အနေဖြင့် 99 လူနာသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တော့တုံ့ပြန်တောင်မှ အကယ်. ထို့နောက်တစ်ဦးကုသမှုခံယူဖို့ sponds လိမ့်မယ်ဖြစ်စေမရှေ့ဆက်အချိန်ကိုသိနိုင်လျှင်, "Stanley Robboy သည် Duke တက္ကသိုလ်ကင်ဆာစင်တာမှာအဖြေရှာတဲ့ရောဂါဗေဒအဘို့ဒုကုလားထိုင်ကပြောပါတယ်။ "ဒီမူးယစ်ဆေး $ 100,000 ကုန်ကျနိုင်ပြီး, မိသားစုများဒေဝါလီခံနိုင်တယ်။ "
Lunit ထံမှတစ်ဦးကသုတေသီတစ်ဦးက high-resolution ကိုစကင်နာသို့ခန္ဆလိုက် feeds
Jussarang Lee က / Lunit
ဒါကတောင်မှကျိုးနွံအကျိုးအတွက်, သို့သော်, အဖြူဖြစ်ခြင်းယနေ့ဆုံးအဆင့်မြင့်ကင်ဆာလူနာငြင်းပယ်သည်။ ကနျြးမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီများသည်မကြာခဏ qui $ 10,000 သလောက်ကုန်ကျနိုင်ပြီး, မျိုးဗီဇစမ်းသပ်မှုများအတွက်ပေးဆောင်မှာ balk ။ "Medicare နှင့်အချို့ကုမ္ပဏီတွေကတချို့ကလွှမ်းခြုံပေးဖို့စတင်နေကြတယ်" ဟု Roychowdhury ကပြောပါတယ်။ "က testing အတွက် reimbursed ရရန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အများနှင့်ကအားလုံးကိုမှာဖုံးလွှမ်းဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းစမ်းသပ်မှုရဖို့ခဲယဉ်းရဲ့ရည်မှန်းချက်။ " တိုင်းပြည်အတွင်းထိပ်တန်းကင်ဆာစင်တာများ၏ဆုံးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အားလုံးသူတို့ရဲ့ရန်စမ်းသပ်ခြင်းပေးပါဘူးအကြောင်းရင်းတစ်ခုရဲ့ နီးပါးအားလုံးကျွမ်းကျင်သူများကသင့်ပါတယ်နေရာတိုင်းကင်ဆာများအတွက်စောင့်ရှောက်မှု၏စံဖြစ်သဘောတူသော်လည်းလူနာ။
လူနာတစ်ဦးအကျိတ်ကိုစမ်းသပ်ရပေနှင့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအလားအလာမူးယစ်ဆေးတိကျဖို့ပွဲစဉ်ကိုပြသသည့်အခါအာမခံမကြာခဏလည်းမူးယစ်ဆေးများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ငြင်းဆန်, Roychowdhury ကပြောပါတယ်။ အဆိုပါအာမခံပြီးသားပြီးနောက်-ရှည်လျားစမ်းသပ်မှုတွေ၏ကာလတစ်စံကုသမှုအဖြစ် FDA ကခွင့်ပြုချက်ကိုဆည်းပူးခဲ့ကြဒါကသာမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဖုံးလွှမ်း။ လင်ဒါနှင့်အခြားသော reimbursable များသောအားဖြင့်နေဆဲမဟုတ်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဒါကကံကြမ္မာ Boyed ၏ FGFR inhibitors ။ Boyed များသောအားဖြင့်အခမဲ့ဆေးဝါးရ DID အဖြစ်တရားဝင်မူးယစ်စမ်းသပ်မှုတွေ၏လက်ဖြစ်လာဘယ်သူကလူနာ။ အဆိုပါအများစုမှာအဆင့်မြင့်ကင်ဆာ-The အရှိဆုံး-စမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများလိုအပ်သူကားအဘယ်သူသူတွေနဲ့အတူတချို့ကလူနာသေတ္တာထဲမှာရည်ရွယ်ချက်စမ်းသပ်မှုတွေကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးကုမ္ပဏီများနှင့်ပင်ပညာသင်နှစ်မကြာခဏသုတေသီများကသူတို့ပျက်ကွက်ခါနီးရလဒ် skew လိမ့်မယ်ကွောကျရှံ့ခွငျးထဲကအလွန်နေမကောင်းလူနာအပါအဝင်ရှောင်ကြဉ်ချင်တယ်။
ငွေပေးချေမှုရမည့်ကုသမှုတစ်ခုတည်းသောအတားအဆီးမဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကန်ကင်ဆာလူနာများ၏အကြောင်း 85 ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့ကကင်ဆာအတော်များများကအမျိုးမျိုးဆကျဆံသူကားအဘယ်သူတစ်ဦးကင်ဆာရောဂါရှာဖွေကုသရေးပါရဂူတွေ့မြင်ဘယ်မှာနေတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကဆေးရုံမှာကုသပါ။ သူများသည်ပုံမှန်အားမပေးတက်နောက်ဆုံးပေါ်စစ်ဆေးမှုများနှင့်ကုသအပေါ်အထွေထွေဖြစ်ကြသည် Caligiuri ကပြောပါတယ်။ အဘယ်သူသည်ဝန်ထမ်း em အဆိုပါဆေးရုံများ '' em ကထွက်ရှာဖွေ၏အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကတဆင့်သွားကြဖို့မျှော်လင့်ထားပါဘူး။ အလွန်အမင်းမှတ်ကင်ဆာစင်တာများအစားအဖြစ်-တစ်သူတို့ရဲ့လူနာလေးပုံတစ်ပုံအတော်များများတိကျစွာအသစ်များမူးယစ်ဆေးများမှာအဖြစ်နေစဉ်, ဆုံးအသိုင်းအဝိုင်းဆေးရုံများမှာရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသုညဖြစ်ပါတယ်။
လူနာအဘယ်သို့ပြုသင့်သနည်း "ငါသည်ရုံကင်ဆာ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုရရှိထားသူကားအဘယ်သူမည်သူမဆိုဖို့ပြောလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးနှင့်အဓိကဆုံးအရာသင်မဆိုကုသမှုကိုစတင်ပါမတိုင်မီကင်ဆာသင့်ရဲ့ကြင်နာအတွက်အထူးကုသူသည်တစ်ဦးကင်ဆာရောဂါရှာဖွေကုသရေးပါရဂူကနေစက္ကန့်အမြင်အရနျလိုအပျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ" Caligiuri ပြောပါတယ် ။ "သင်၏ပထမဦးဆုံးကုသမှုကိုသင်ပထမဦးဆုံး '' em တယ်လျှင်အလုပ်လုပ်ခဲ့-ရှိစေခြင်းငှါ၎င်းအကျိတ်သာမကအခြားအကုသပေးဖို့အဲဒီရည်မှန်းချက်ကုသမှုပေးရန်မျိုးစုံ resistors ဖွံ့ဖြိုးအကောင်းဆုံးများထဲမှမပါရှိလျှင်။ " အခြားကုသမှု options များနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းရာတွင်အခါ, အသိုင်းအဝိုင်းကင်ဆာရောဂါရှာဖွေကုသရေးပါရဂူဒါကမကြာခဏလူနာအပြင်းအထန်တောင်းဆို ပထမဦးဆုံးကုသမှုကိုစတင်ပိတ်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ တချို့ကကစားတကယ်တော့, ကသူတို့ရဲ့ဘဝအသက်ကိုကယ်တင်မယ်လာသောအခါပြန်လည်နာလန်ထူ-တောင်မှအတိုနှောင့်နှေး၏သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုထိခိုက်စေမည်အကြောင်းလူနာတွေကို '' စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဗန်ဒါဘစ်လ်ရဲ့ကင်ဆာစင်တာတိကျစွာ-ဆေးဝါးအစပျိုးအတွက်ရပ်ရွာဆေးရုံကင်ဆာရောဂါရှာဖွေကုသရေးပါရဂူ၏ပါဝင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေကြိုးစားကြသည်။ ၎င်း၏အကြှနျုပျ၏ကင်ဆာဂြီနို website ကဆရာဝန်များနှင့်လူနာသစ်ကိုကုသနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေမဆိုအထူးကင်ဆာ-ဝက်ဘ်ဆိုက်စာရင်း 4,000 စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်။ "လူနာကျွန်တော်တို့ကိုလာတဲ့အခါငါ့ကိုမိတ်ဆက်နှင့်သူတို့ပြီးသား '' em ကိုကူညီမယ့်မဟုတျကွောငျးတစ်ဦးကိုကုသပေး beens ပါတယ်," ဗန်ဒါဘစ်လ်ရဲ့ Balser ကပြောပါတယ်။ "ဒါကပွိုင့်မှာလူနာရှစ်ဘောလုံးကိုနောက်ကွယ်မှ, ငါတို့သည်လုပျနိုငျသူအပေါင်းတို့ကိုအပိုင်းပိုင်းအထိကောက်ယူဖို့ကြိုးစားသည်။ " အတော်များများသည်အခြားထိပ်တန်းကင်ဆာစင်တာကဲ့သို့ပင်ဗန်ဒါဘစ်လ် est ရရှိခြင်းအတွက်သူများသည်ဆေးရုံများကိုပံ့ပိုးဖို့ icts ဒေသကြီးအတွင်းရှိအသိုင်းအဝိုင်းဆေးရုံများနှင့်အတူဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှု Creating တိကျ-ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှု, မျိုးဗီဇစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်မူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့လက်လှမ်း။ ဗန်ဒါဘစ်လ်ပြီးသားငါးပြည်နယ်များရှိနီးပါး 70 ဆေးရုံများမှထိုသို့သောဆက်ဆံရေးအတုရှိပါတယ်။
နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှု algorithms ကယ့်ကိုသူတို့က, သူတို့က Ph.D ၏တောင်မှတစ်တပ်ကိုသတိရနေတယ်ပါ့ဒါကကိုကြည့်ပါအမိန့်ပုံစံများကိုစိစစ်နေတဲ့ကင်ဆာနောက်ကွယ်မှဇီဝဗေဒ "နားလည်" ပါဘူးသဲလွန်စရှာဖွေနေ။ အဘယ်အရာကိုလိုအပ်မယ့်အချက်အလက်များ၏စာရေးတံဖြစ်ပါသည်: MRI, CT နှင့်ပေ Scan ဖတ်ထံမှအဖြစ်မျိုးရိုးဗီဇစမ်းသပ်ခြင်းမှ။
ဂျော်နီ Greig / Getty
တိကျ-ဆေးဝါးချဉ်းကပ်၏တစ်ဦးကကြီးထွားလာတန်းစီဇယားကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌ကိုင်လျက်ကနေကင်ဆာကာကွယ်ခြင်းအတွက်သြစတေးကူညီပေးပါမည်။ ထိုသို့သောပေ Scan ဖတ်အမျှတချို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်, ဒါဟာဓါတ်ရောင်ခြည်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ရောင်ခြည်နှင့်အတူပွဲချင်းပြီးပျောက်ပျက်သောစပါးနိုင်နိုင်အောင်သေးငယ်သောအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကင်ဆာဆဲလ်တွေတစ်စပျစ်သီးပြွတ်ကောက်ဖို့လိုအပ် sensitivity ကိုနှင့် resolution ကိုချဉ်းကပ်နေကြသည်။ ထိုသို့သောကုသမှုအဆင်ပြေ Be နှင့်ပိုနည်းပြဿနာများနှင့်အတူလာမလား။
အဘယ်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမှတက်စောင့်ဆိုင်းမျိုးရိုးဗီဇသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ဖို့ကင်ဆာရရှိသွားတဲ့? လူတိုင်း qui သူတို့ပေ Scan ဖတ်နဲ့တူစမ်းသပ်မှုများအတွက်အမြင့်ဆုံးအန္တရာယ်မှာကင်ဆာနေကြည့်ဖို့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မျိုးဗီဇစိစစ်တယ် အကယ်. qui $ 7,000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကုန်ကျနိုင်ပါတယ်, selection ပေးအပ်ခြင်းခံရနိုင်ပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, မျိုးဗီဇစိစစ် 23andMe တူသောစားသုံးသူ-အာရုံစူးစိုက်မျိုးရိုးဗီဇ-စမ်းသပ်ကုမ္ပဏီများမှ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖြစ်ခြင်းကိုအပြစ်လွတ်လွန်း unrefined အဖြူဟာလုံးလူဦးရေထွက်လှိမ့်, လောလောဆယ်ဖြစ်စေလွန်းစျေးကြီးအတွင်းသဘောပင်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်။ ရည်ရွယ်ချက်သုတေသီများနှင့်ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီများကကုန်ကျစရိတ်ဖြတ်တောက်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇစမ်းသပ်ခြင်း၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုပြုစုပျိုးထောင်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ "ငါတို့သည်သင်တို့၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်သုံးနှစ်တစ်ကြိမ်သင်တို့အဘို့အအန္တရာယ်မှာပါပဲကင်ဆာ, လက်ျာရုပ်ပုံလွှာကိုသိနိုငျလြှငျ," Caligiuri ကပြောပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, အဲဒါမှတဆင့်ချော်ပါဘူးဒါကကင်ဆာ, တိကျဆေးဝါးကယ့်လက်ျာမူးယစ်ဆေး-ရပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကသိရန်ကောင်းသောဖြစ်ပါ့။ အဲဒီလမ်းဟာကင်ဆာလူနာတွေကိုပဲသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးရက်ပေါင်း-The လင်ဒါရဲ့, ဒါဟာမှတက်မပေးခဲ့ကြောင်းကံကြမ္မာ Boyed အတွက်အဆင်ပြေဖန်ဆင်းခံရခြင်းထက်မျှော်ကြည့်ဖို့နောက်ထပ်ဖူးပါလိမ့်မယ်။
မျက်နှာဖုံး Credit JANULLA / Getty
JANULLA / Getty
"ငါသည်ကင်ဆာနှင့်အတူ Living တာနဲ့ဒါဟာအဝေး Going ရဲ့!" Olivia နယူတန်-ယောဟန်သည်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ကင်ဆာ Internship4ဆန့်ကျင် "အနိုင်ရရှိမှု" ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြေညာ